BUDDHIST TERMS' Dictionary: FALLING FROM BHIKKHUHOOD - ပါရာဇိက
FALLING FROM BHIKKHUHOOD - ပါရာဇိက
FALLING FROM BHIKKHUHOOD Pᾱrᾱjika
ပါရာဇိက - ပါရာဇိကအာပတ်၊ ရဟန်းအဖြစ်မှ ဆုံးရှုံးစေနိုင်သောအပြစ်။
(၁) မေထုန်အမှုကို ကျူးလွန်မှု၊
(၂) သူတပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူမှု၊
(၃) လူ၏အသက်ကို သတ်မှု၊
(၄) ဈာန်မဂ်ဖိုလ်တရားထူးများကို မရရှိဘဲ ရရှိသည်ဟု လိမ်ညာပြောဆိုမှုတို့ဖြစ်သည်။
ထိုပြစ်မှုလေးမျိုးကို ကျူးလွန်သော ရဟန်းတော်များသည် သာသနာတော်၌ ရဟန်းဘ၀ဖြင့် နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲ လူ့ဘ၀သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသည်။ နောက်ထပ်လည်း ရဟန်းပြုခွင့်မရှိတော့၊ သာမဏေဘ၀ဖြင့်ကား နေခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းအပြစ်များသည် မြတ်စွာဘုရား ပညတ်ထားခဲ့သော (၂၂၇) ပါးသော သိက္ခာပုဒ်တို့တွင် အပြစ်အကြီးလေးဆုံး ဖြစ်သည်။
Offence deserving expulsion from bhikkhuhood; Pᾱrᾱjika offence under the Vinaya rules
There are four kinds of such offences:
(b) taking what is not given;
(c) killingahuman being;
(d) falsely claiming or pretending to have gained jhᾱna, magga, phala.
A bhikkhu who commits one of the above four offences has no right to stay any longer in the Order of bhikkhus and has to return to the life ofalayman although he may choose to remainasamaṇera.
These four offences are the most heinous of offences mentioned in the 227 Vinaya disciplinary rules promulgated by the Buddha.